CATIC oo saxiixday heshiis 90 milyan - BBC News Somali
CATIC oo saxiixday heshiis 90 milyan
Image caption Shiinaha ayaa maalgalin badan ku sameeynayo Afrika
Shirkada dowladda shiinaha ay maamusho ee CATIC waxay diyaaradaha militariga u dhoofisaa Sri Lanka, balse waxay sidoo kale ay shirkado leedaha dano kale.
Waxay haatan heshay qandaraas ku kacaya 90 milyan oo doolar oo ay ku dhisayso kuliyad jaamacad ku taalla meel u dhow caasimada. Gollaha wasiirada ayaa ansixiyey qandaraaskan 9 maalmood ka dib markii dowladda ay dib ula laabatay qandaraas la siiyey isla shirkadan oo ahayd in ay dhisto hoteel qaali ah oo ay ku baxaysay lacag dhan 500 oo milyan oo doolar.
Si dhaqsa ah ayey dowladda dib uga laabatay heshiiskii ahaa in ay ku iibiso dhulka waxayna sheegtay in la ogolyahay keliya in la kereeyo dhulka halka laga iibin lahaa. Inkastoo haddana dhul ku dhow kan ay dowladda ka noqotay horay looga iibiyey shirkada saldhigeedu yahay Hong Kong oo la yiraahdo Shangri-La hotel.
Dowladdu waxay haatan u muuqataa in ay ku dadaalayso sidii ay u wanaajin lahayd xiriirka ay la leedahay shirkadaha CATIC ee Shiinayska iyadoo lagu jiro waqti lacagaha amaahda ah ee dowladda ka hesho Shiinaha lagu maalgelinayo mashaariic ay ka mid yihiin wadooyinka, tareenada, dekad iyo garoon diyaaradeed.
Xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa loolan xooggan u galay in aanan la iibinin dhulka ku yaalla xeebta, waxa uuna ku doodayaa in uu jiro qof si sharci-daro ah uga faa'ideysanayo heshiisyadda lala gelayo shirkadaha Shiinaha.
Dowladdu waxay ku eedeyneysaa mucaaradka in uu is hortaagayo oo uu niyad jabinayo maalgashiyaasha, balse wargeyska ka soo baxay Sri Lanka ee la yiraahdo Sunday Times ayaa ku eedeynaya dowladda in ay qaadanayso go'aamo dhinaca ganacsiga iyadoo aanan si wanaagsan looga fikirin, arrintaas waxaa ka dhashay buu leeyahay wargeyska in la waayo cid maalgashi ku sameysa dalka.
Dhinaca kale koonfurta dalka taageerayaasha dowladda ayaa waxay weerareen oo ay la wareegeen warshad soo saarta sokorta, warshadaas oo uu leeyahay siyaasi ka tirsan mucaaradka, dowladda waxay doonaysaa in ay warshadaas ka dhigto hanti qaran iyadoo adeegsanayso sharci cusub oo muran dhaliyey.